Thura Soe @ Moe Sat Ko Website URL: 22
Jul Published in World News Be the first to comment! နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းတစ်ခုတိုက်ခတ်ပြီးနောက် စစ်တပ်မှ ကယ်ဆယ်ကူညီရေး လုပ်ဆောင်ပေးနေရ ဝယ်လင်တန် ဇူလိုင် ၂၂၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ အကြီးမားဆုံးကျွန်းတွင် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ကြေညာလိုက်ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်း အိမ်ခြေ ရာပေါင်းများစွာကို ရွှေ့ပြောင်းကယ် ဆယ်ထားရသည့်အပြင် အဝေးပြေးလမ်းမများ ပြတ်တောက်နေသည့် အတွက် စစ်သားများက အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Jul Published in Entertainment Be the first to comment! ကျွန်တော်က သရုပ်ဆောင် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်ရမှာပါ ~ ကျော်ကျော် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် မိန်းမလျာ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပြဇာတ်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်က''ကျွန်တော်တို့ ပြဇာတ်လေးကို ပရိသတ်က ကြိုက်ကြတဲ့အတွက် ဝမ်းလည်း ဝမ်းသာတယ်၊ ပျော်လည်း ပျော်ပါတယ်။
Jul Published in Entertainment Be the first to comment! အချစ်ကားသီးသန့်ရိုက်ချင် တယ် ~ နန်းဆုဦး နန်းဆု စိတ်ထဲမှာ လောလော ဆယ် အချစ်ဇာတ်ကားတွေ သီးသန့် ရိုက်ချင်နေပါတယ်။ သွေးအေးအေး နဲ့သွားတဲ့ဆိုက်ကို ကာရိုက်တာမျိုးကို ရိုက်ကူးချင်နေတယ်။
...56789...111213Page9of 514 Business Info